Warbixin– Musharixiinta Doorashada Puntland 2019 oo ka walwalsan Doorashadu iney dhacayso iyo inkale | puntlandi.com
Saturday, July 21st, 2018 | Posted by Pi
Warbixin– Musharixiinta Doorashada Puntland 2019 oo ka walwalsan Doorashadu iney dhacayso iyo inkale
Madaxweynaha Dowlada Puntland prof. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas wuxuu dhowr jer kusoo cel celiyey in Doorashada Madaxweynanimada Puntland ee janaayo 2019 aysan SINABA dib uga dhaceyn xiligeed LAAKIIN Murashixiinta u sharaxan Madaxweynanimada Puntland waxay ka walwal San yihiin in ay Xukuumadu wadato qorshayaal kale oo Doorashada dib loogu dhigayo ama lagu baajinayo.
Kulankii u dambeeyey ee Madaxweyne Gaas uu la qaato Shacabka Puntland wuxuu bishaan ka dhacay Bruselles Dalka Belgium halkaasoo uu Madaxweynuhu kula shiray Jaaliyada Puntland ee Yurub, kulanass wuxuu Madaxweynuhu hoosta ka xariiqay in Doorashada ay dhacayso wakhtigeeda.
Midkamida Murashixiinta oo Maadaama uusan wali ku dhawaaqin in uu Musharax yahay naga dalbadey inaanan Magacaabin ayaa yiri, ‘‘ Madasha ay Murashixiinta ku mideysan yihiin ee Puntland Concern Groupe waxay malaynayaan in iskuda’y uu jiro la isku dayayo in Doorashada aan wakhtigeeda la qaban, garanse mayno waxa isku daygaas yahay, anigu waxaan aamin sanahay, meelo bandana aan ka maqlay in la doonayo in Doorashada dib loo dhigayo. Si dadban ama si Dastuurka loo marayo””
Cali Xaaji Warsame oo horey ugu tartamay Doorashada 2014, Wasiirka Waxbarashadana kasoo noqdey Xukuumada Madaxweyne Gaas ayaa Waraysigii ugu dambeeyey ee uu bixiyo oo uu siiyey Wargeyska Wardheer News wuxuu yiri” in Mudo kororsi yimaado ama Wakhtiga Doorashada ay dhici waydo, waxwalbaa waa suuragal LAAKIIN Aniga iyo dadbadan oo reer Puntland ah waxay la Dagaalami doonaan isku da’y kast oo hakinaya Doorashada. ”.
Hadaba maadaama Madaxweyne Gaas uu dhowr jeer hoosta ka xariiqay in Doorashadu ay wakhtigeeda ku dhacayso, maxay ka walwalsan yihiin Murashixiintu oo ay hadalka Madaxweyne Gaas u aamin waayeen	?
Murashixiinta aan wali ku dhawaaqin iney Murashixiinta yihiin oo mid kale oo kamida oo aan la hadalnay wuxuu yir isagoo dhoola cadaynaya * Waa run Gaas Mar walboo la waydiiyo Arimaha Doorashada wuxuu sheegaa in wakhtigeeda aan Doorashada laga daba marinayn, hadana shaki baa nagu jira hadaanahay Murashixiinta*
Shakiga uu Murashaxaan sheegay waa mid ay kawada siman yihiin Murashixiinta kaloo oo dhan.
Waxaa iyana caado soo noqnoqoneysa noqotay in Madaxda Puntland marka uu xiligoodu dhamaanayo ay sii jecleystaan inay xilka sii hayaan halka Murashixiinta U hanqal taagaya kursiga ay iyana iyagoo Ciidan beeleed wata ay bilaabaan hanjabaad iyo hadalo kul kulul.
Madaxweyne Cabdiwali Maxamed Gaas wuxuu sida uu sheegay uu balan qaadey in Doorashada wakhtigeeda ay ku dhacayso ayna noqoneyso mid Cadaalad ah oo Sharciga ku taagan laakiin wali waxaa muuqda Dal daloolo badan. Sida…
Gudiga Doorashada wali ma ahan kuwo ay ku kalsoon yihiin Murashixiintu, Waxaana soo magacaabey badankooda Madaxweynaga, Waxayna in Mudo ah lasoo shaqaynayeen Xukuumada, Dad badan waxay aamin san yihiin in Gudigu uu ku milmay Xukuumada, mudo bilo laga jooga ayaa Gudiga Doorashada waxaa wax laga waydiiyey Howlaha Doorashada 2019 , Waxayna ku jawaabeen, Arintaas waxay u taal Madaxtooyada.
Doorashadii 2004 buuq ayaa ka dhashay Gudigii Doorashada ee Madaxweynihii xiligaas Dr. Faroole uu soo magacaabay, waxayna murashixiintii xiligaas oo Madaxweyne Gaas uu xiligaas hogaaminayay ay Dr.Farooleku khasbeen inuu kala diro Gudigii uuna soo magacaabo Gudi cusub oo waxoogaa kalsooni ah ay ku qabeen Xubnihii Taryamayay.
Doorashada sideedaba waxay udub dhexaad u ah amaanka oo hadaan Amaan jirin Doorashada mugdi baa gali kara, Sida muuqatana xaalada Amaan ee Dalka farbaa ku mudan.
Ciidamadii ugu badnaa oo Puntland ay Dagaal u diyaariyaan ayaa waxay ku sugan yihiin Duleedka Garowe (Tukaraq),Madaxweyne Gaas iyo Madaxweyne Xigeen Camey waxay labaduba wacad ku Maureen in ay tagayaan Laascaanood, Taas dadku waxay u fasirteen In Dagaal diyaar loo yahay, Waxaan Ciidan lagu soo daabuleeyey Duleezka Tukaraq, Xaaladuna HADA waa gabar sagaalkeedii dhamaadey, Doorashadii waxba kama harin.
Hadaba Hadal haynta iyo walwalka ay Murashixiintu ka walwalsan yihiin qabsoomida Doorashada waxaa aasaas u ah xaalada Amaan ee Dalku galay bilihii lasoo dhaafey, Hadii Dagaal qarxo bilowga sanadka soo socda Madaxweynuhu wuxuu awood Dastuuri ah u leeyahay inuu Dalka galiyo xaalad deg deg ah(state of emergency),tasoo macneheedu yahay in xaaldii caadiga ahayd nolol maalmeedka lagu badalay xaalad gaara, oo ku meel gaar ah (Marshall law), xaaladaas deg dega a ah waxay baajineysaa qorshe walba oo horey loo dejiyey iney dhacaan inta xaaladaas deg dega ah lagu jiro,Ciidanka iyo Hay’adaha Dowlada waxay awood u helayaan iney Shacabka ka qaadaan xuquuqdooda hadii loo baahdo.
Iyadoo dalku xaalad deg deg ah ku jiro way agtahay in doorasho ay dhacdo, Waa ad arin i in karat in xaaladaas iyo Doorashada isku soo beegmaan.
Nooca Doorashada 2019
Doorashada 2019 kama fursanayso iney u dhacdo qaabkii hore ee Xildhibaanadu ay Odoyaal dhaqameedku soo xulayeen, ka dib na ay Madaxweyne iyo ku Xigeynkiisa ay dooranayeen, in kasastoo uu Madaxweyne Gaas Mar kuu xilka la wareegay uu Balan qaadey in Doorashada 2019 uu Puntland gaarsiin doonto One man One vote, taasi ma suura galin oo waxay u muuqataa in qaabkii hore aan laga fursanayn.
Warar kale ayaa sheegaa in Xukuumadu ay wadato qorshe kale oo u dhow qaabkii hore ee Doorashada u dhici jirtay, wararku waxay ka loo sheegayaan in la kordhinayo kuraasta baarlamaanka Puntland, oo hada ah 66 Xildhinaan, waxaan macquul ah in la gaarsiiyo 77 xildhibaan.
Marwalba Beesha CaalamKa oo Soomaaliya ka caawisa dhinaca Dhaqaalaha iyo Amaanka, waxay Mar walba doonayaan in doorashooyinka aan wakhtigooda laga daba marin, Shirkii ugu dsmbeeyey ee bishaan bartameheedii ka ddhacay Bruselles waxaa ahoosta laga xariiqay Lana faray madaxda Soomaaliya in Wakhtiga Doorashooyinka la tix galiyo.
Iskusoo duuboo Doorashada Puntland ee 2019 waxay noqon doontaa mid indhagaara lagu hayo qaabka ay u dhici doonto.